Nofollow, Dofollow, UGC, သို့မဟုတ်စပွန်ဆာပေးသောလင့်ခ်များကဘာတွေလဲ။
နေ့တိုင်းကျွန်ုပ်၏စာပုံးသည်ကျွန်ုပ်၏အကြောင်းအရာတွင်လင့်များထားရန်တောင်းခံနေသော spam SEO များကုမ္ပဏီများနှင့်ပြည့်နှက်နေသည်။ ၎င်းသည်မရေမတွက်နိုင်သောတောင်းဆိုမှုများနှင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ကိုတကယ်စိတ်ဆိုးစေသည်။ ဤတွင်အီးမေးလ်ပုံမှန်အားဖြင့်မည်သို့သွားသနည်း
ချစ်ခင်ရပါသော Martech Zone,
ခင်ဗျားဒီအံ့သြစရာကောင်းတဲ့ဆောင်းပါးကို [သော့ချက်စာလုံး] ပေါ်မှာရေးခဲ့တယ်ဆိုတာသတိရတယ်။ ဤအကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်ဆောင်းပါးကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ရေးသားခဲ့သည်။ ငါမင်းရဲ့ဆောင်းပါးအတွက်ကောင်းတဲ့ထပ်ဖြည့်မယ်လို့ထင်တယ်။ ငါတို့ဆောင်းပါးကိုလင့်ခ်နဲ့ကိုးကားနိုင်ရင်သိပါစေ။
ပထမ ဦး စွာသူတို့သည်ဆောင်းပါးကိုအစဉ်အမြဲရေးသည်၊ သူတို့သည်ကျွန်ုပ်ကိုကူညီရန်နှင့်သူတို့လုပ်ရန်ကြိုးစားနေသည်ကိုအတိအကျသိသောအခါကျွန်ုပ်၏အကြောင်းအရာကိုတိုးတက်စေရန်ကြိုးစားနေသည်။ website ရဲ့ backlink။ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်သည်အကြောင်းအရာပေါ် မူတည်၍ သင်၏စာမျက်နှာများကိုမှန်ကန်စွာရည်ညွှန်းနေစဉ်ထိုစာမျက်နှာများသည်၎င်းတို့နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည့်သက်ဆိုင်ရာအရည်အသွေးမြင့်ကွန်ရက်စာမျက်နှာအရေအတွက်အားဖြင့်အဆင့်သတ်မှတ်လိမ့်မည်။
Nofollow Link ဆိုတာဘာလဲ။ Link ကိုလိုက်နာပါသလား
A Nofollow link ကို ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အား၎င်းမှတစ်ဆင့်မည်သည့်အခွင့်အာဏာကိုမဆိုဖြတ်သန်းသွားသောအခါ link ကိုလျစ်လျူရှုရန်ပြောသည့် anchor tag အတွင်းတွင်အသုံးပြုသည်။ ဒါက HTML code မှာပါတဲ့ပုံပဲ။
အခုဆိုရင်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင် crawler ကကျနော့်စာမျက်နှာကိုတွားသွားပြီး၊ ကျွန်တော်ရဲ့အကြောင်းအရာကိုအညွှန်းနဲ့အရင်းအမြစ်တွေဆီကိုအခွင့်အာဏာပေးဖို့ backlinks တွေကိုဆုံးဖြတ်ပေးသည်။ nofollow လင့်များ။ ဒါပေမဲ့၊ ငါရေးသားလိုက်တဲ့အကြောင်းအရာအတွင်းရှိ destination စာမျက်နှာနဲ့ချိတ်ဆက်မိရင်၊ အဲဒီ anchor tags တွေမှာ nofollow attribute မရှိပါ။ သူတို့ကိုခေါ်ကြသည် Dofollow လင့်များ။ ပုံမှန်အားဖြင့် rel attribute ကိုထပ်ထည့်။ link ၏အရည်အသွေးကိုမဆုံးဖြတ်ပါက link တိုင်းသည်အဆင့်သတ်မှတ်ထားသောအခွင့်အာဏာကိုဖြတ်သန်းသွားသည်။
စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသည်မှာ nofollow links များကို Google Search Console တွင်မကြာခဏဖော်ပြနေဆဲဖြစ်သည်။ ဘာကြောင့်လဲ
ဒါကြောင့် Dofollow Links တွေကဘယ်နေရာမှာမဆိုငါအဆင့်သတ်မှတ်ပေးတယ်။
backlinking မှတဆင့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်စွမ်းကိုရှာဖွေတွေ့ရှိသောအခါဒေါ်လာဘီလီယံတန်စက်မှုလုပ်ငန်းသည်ဖောက်သည်များအဆင့်အတန်းမြင့်တက်စေရန်ကူညီရန်ညတွင်းချင်းစတင်ခဲ့သည်။ SEO ကုမ္ပဏီများသည်အလိုအလျောက်တည်ဆောက်ပြီးတည်ဆောက်ခဲ့သည် link farms နှင့်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင် manipulate ဖို့ဓာတ်ငွေ့အပေါ်အရှိန်မြှ။ ဟုတ်ပါတယ်၊ ဂူဂဲလ်ကသတိထားမိသည်နှင့်အားလုံးပြိုကွဲသွားသည်။
backlinks များစုဆောင်းမိသော site များ၏ rank ကိုစောင့်ကြည့်ရန် Google သည်၎င်း၏ algorithms ကိုတိုးတက်ခဲ့သည် သက်ဆိုင်ရာ, authoritative domains များ။ ထို့ကြောင့်မည်သည့်နေရာတွင်မဆိုလင့်ခ်များထည့်ခြင်းကသင့်ကိုမကူညီနိုင်ပါ။ မြင့်မားသောသက်ဆိုင်ရာနှင့်အခွင့်အာဏာရှိသောဆိုဒ်များတွင် backlink များကိုရရှိခြင်းသည်သင့်အားကူညီလိမ့်မည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အနေနှင့်လင့်ခ် spamming သည်သင်၏အဆင့်အတန်းကိုထိခိုက်နိုင်ဖွယ်ရှိသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ဂူးဂဲလ်၏ထောက်လှမ်းရေးသည်ခြယ်လှယ်မှုများကိုခွဲခြားပြီးသင့်အတွက်အပြစ်ပေးနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ link ကိုစာသားအရေးပါပါသလား?
လူတွေကကျွန်တော့်ဆီကိုဆောင်းပါးတွေတင်တဲ့အခါသူတို့ကျောက်ဆူးစာသားထဲမှာအလွန်အမင်းသိသာထင်ရှားတဲ့သော့ချက်စာလုံးတွေသုံးလေ့ရှိတယ်။ ဂူဂဲလ်၏အလဂိုရီဇင်များသည်အလွန်ရယ်စရာကောင်းသည်ကိုကျွန်ုပ်အမှန်တကယ်မယုံကြည်ပါ။ သင်၏ link အတွင်းရှိစာသားသည်အရေးအကြီးဆုံးသောသော့ချက်စာလုံးများသာဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ဂူးဂဲလ်ကလင့်ခ်ပတ်ပတ်လည်ရှိအကြောင်းအရာများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပါကကျွန်ုပ်မအံ့သြပါ။ မင်းရဲ့အချိတ်အဆက်တွေနဲ့မင်းဒီလောက်ရှင်းနေဖို့လိုတယ်လို့ငါမထင်ဘူး။ သံသယဖြစ်လျှင်၊ ကျွန်ုပ်၏ဖောက်သည်များအားစာဖတ်သူအတွက်အကောင်းဆုံးအရာကိုလုပ်ရန်ကျွန်ုပ်အကြံပြုသည်။ ဒါကြောင့်ငါကလူတွေကိုတကယ်မြင်ချင်တဲ့အပြင်ထွက်သွားတဲ့ link ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ခလုတ်တွေကိုသုံးတယ်။
ထို့အပြင်ကျောက်ဆူးတံဆိပ်နှစ်ခုလုံးကိုကမ်းလှမ်းသည်ကိုမမေ့ပါနှင့် စာသားမ အဖြစ်တစ်ဦး ခေါင်းစဥ် သင့်ရဲ့ link ကိုဘို့။ ခေါင်းစဉ်များသည်ဖန်သားပြင်ဖတ်သူများအနေဖြင့်၎င်းတို့၏အသုံးပြုသူများနှင့်ချိတ်ဆက်မှုကိုဖော်ပြရန်ကူညီနိုင်သည့် attribute တစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော် browser (ဘရောက်ဆာ) အများစုက၎င်းကိုပြသသည်။ ခေါင်းစဉ်စာသားထားခြင်းသည်အသုံးပြုသောသော့ချက်စာလုံးများအတွက်သင်၏အဆင့်ကိုအထောက်အကူပြုနိုင်ခြင်းရှိမရှိ SEO gurus ကသဘောမတူပါ။ တစ်ခုခုကိုလမ်း, ငါကဒါဟာအလွန်ကြီးစွာသောအလေ့အကျင့်င်ထင်နှင့်တစ်စုံတစ် ဦး ကသင်၏ link ကိုကျော်ကြွက်နှင့်အစွန်အဖျားတင်ဆက်တဲ့အခါအနည်းငယ် pizazz ထည့်သွင်း။
ဒီနေရာမှာငါနေ့စဉ်လက်ခံရရှိတဲ့နောက်ထပ်အီးမေးတစ်ခုပါ။ ငါတကယ်တော့ဒီအဖြေကိုပေးတယ်။ သူတို့ကကျွန်တော့်နာမည်ကိုစွန့်စားပြီးစွန့်စားခိုင်းတယ်၊ အစိုးရကဒဏ်ငွေရဖို့နဲ့ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်တွေကနေဖယ်ထုတ်ဖို့တောင်းဆိုတာလား။ ဒါဟာရယ်စရာကောင်းတဲ့တောင်းဆိုချက်ပါ ဒါကြောင့်တခါတလေငါကပဲတုံ့ပြန်လိုက်တာကို ၀ မ်းသာမယ်လို့ငါပြောလိုက်ရင်သူတို့တွေဟာ backlink အတွက် $ 18,942,324.13 ကုန်ကျမယ်။ ငါပိုက်ဆံကြိုးတပ်ဖို့တစ်စုံတစ် ဦး ကိုစောင့်ဆိုင်းနေတုန်းပဲ။
ခင်ဗျားဒီအံ့သြစရာကောင်းတဲ့ဆောင်းပါးကို [သော့ချက်စာလုံး] ပေါ်မှာရေးခဲ့တယ်ဆိုတာသတိရတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆောင်းပါးကိုဤနေရာတွင်ညွှန်ပြရန်သင်၏ဆောင်းပါးတွင် link တစ်ခုထားရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့ပေးချင်ပါသည်။ dofollow link အတွက်ပိုက်ဆံဘယ်လောက်ကျမလဲ။
ဂူဂဲလ်၏ဝန်ဆောင်မှုစည်းမျဉ်းများကိုချိုးဖောက်ခြင်း - သူတို့သည်ကျွန်ုပ်၏လခပေးသောလင့်ခ်ကိုဂူဂယ်လ်ရှာဖွေသူများအတွက်ဖုံးထားရန်တောင်းဆိုနေကြသည်။
စီမံခန့်ခွဲရန်ရည်ရွယ်မဆိုလင့်များ PageRank သို့မဟုတ်ဂူးဂဲလ်ရှာဖွေမှုရလဒ်များတွင်ဆိုဒ်၏အဆင့်သတ်မှတ်ချက်သည်ချိတ်ဆက်မှုအစီအစဉ်နှင့်ဂူဂဲလ်၏ချိုးဖောက်မှုဟုယူဆနိုင်သည် Webmaster လမ်းညွှန်ချက်များ.
ဖက်ဒရယ်စည်းမျဉ်းများချိုးဖောက် - သူတို့သည်ထောက်ခံချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ FTC လမ်းညွှန်ချက်များကိုချိုးဖောက်ရန်ကျွန်ုပ်အားတောင်းဆိုနေပါသည်။
စာဖတ်သူများရဲ့ယုံကြည်မှုကိုချိုးဖောက်ခြင်း - သူတို့ကကျွန်တော့်ပရိသတ်ကိုလိမ်ဖို့ပြောနေတယ်။ ငါနှင့်အတူယုံကြည်မှုရဖို့အောက်ပါတည်ဆောက်ရန် 15 နှစ်ကြာအလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့ပရိသတ်ကို။ ဒါဟာအဆင်သင့်မဖြစ်သေးဘူး ဒါ့အပြင်ဆောင်းပါးတိုင်းမှာရှိတဲ့ဆက်နွယ်မှုတိုင်းကိုသူနဲ့တွဲဖက်ချိတ်ဆက်ထားတာလားဒါမှမဟုတ်သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ဖြစ်ငါပြောတာကိုတွေ့ရတာပါ။
ကမကထပြုထားသောလင့်ခ်များကအသုံးပြုသည်ကိုဂူဂဲလ်ကမေးလေ့ရှိသည် nofollow ဂုဏ်ရည်။ သို့သော်၊ ယခုသူတို့သည်၎င်းကိုပြုပြင်ပြီးငွေပေးချေထားသည့်လင့်ခ်များအတွက်စပွန်ဆာပေးသော attribute အသစ်တစ်ခုရှိသည် -
ကမကထပြုထားသောတန်ဖိုးရှိသည့်ကြော်ငြာများ (သို့) ပေးဆောင်ထားသည့်လင့်ခ်များဟုခေါ်လေ့ရှိသည့်နေရာချထားသည့်နေရာများဖြစ်ကြောင်းလင့်ခ်များကိုမှတ်ပါ။
ထို link များကိုအောက်ပါအတိုင်းဖွဲ့စည်းထားသည်။
အဘယ်ကြောင့် Backlinkers ရုံမှတ်ချက်ရေးရန်မထားဘူး?
PageRank ကိုပထမဆုံးအကြိမ်ဆွေးနွေးပြီးဘလော့ဂ်များကိုမြင်ကွင်းသို့ပြောင်းရွှေ့သောအခါမှတ်ချက်သည်များသောအားဖြင့်ဖြစ်သည်။ ဆွေးနွေးမှုပြုလုပ်ရန်အဓိကနေရာသည် (ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်နှင့်တွစ်တာမတိုင်မီ) သာမကစာရေးသူ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဖြည့်စွက်ပြီးသင်၏မှတ်ချက်များတွင် link တစ်ခုပါ ၀ င်သည့်အခါတွင်ရာထူးကျော်လွန်သွားသည်။ Comment spam ကိုမွေးဖွားခဲ့သည် (ယနေ့ခေတ်တွင်ပြaနာတစ်ခုဖြစ်နေဆဲ) ။ အကြောင်းအရာစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်များနှင့်မှတ်ချက်စနစ်များသည်မှတ်ချက်ရေးသားသူပရိုဖိုင်းများနှင့်မှတ်ချက်များအပေါ် Nofollow လင့်များကိုမတည်ထောင်မီမကြာမီတွင်ဖြစ်သည်။
ugc ဆိုတဲ့ attribute ကို Google ကစတင်ထောက်ပံ့နေပြီ။ UGC အသုံးပြုသူ -generated အကြောင်းအရာအတိုကောက်ဖြစ်ပါတယ်။
သင်တို့သည်လည်း attribute တွေပေါင်းစပ်ကိုသုံးနိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် WordPress တွင်မှတ်ချက်တစ်ခုသည်အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် -
External ဆိုတာနောက်တစ်ခုက link ကိုသွားကြောင်း crawlers တွေသိစေချင်တယ် ပြင်ပ ဆိုက်။
Dofollow Links များပိုမိုရရှိရန် Backlink Outreach ကိုသင်လုပ်သင့်သလား။
ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်ကျွန်တော်နဲ့အကြီးအကျယ်အငြင်းပွားစရာပဲ။ ကျွန်တော်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့် spammy အီးမေးလ်များသည်အမှန်တကယ်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေပါသည်။ ကျွန်ုပ်သူတို့ကိုမခံနိုင်ပါ။ ငါယုံကြည်ဖို့အခိုင်အမာယုံကြည်တယ် အသကျမှေး လင့်များ, သူတို့အဘို့မမေးပါ။ ငါ့သူငယ်ချင်းကောင်း Tom Brodbeck ကဒါကိုသင့်လျော်စွာအမည်ပေးခဲ့သည် linkearning။ ငါသည်ငါ့ site မှထောင်ပေါင်းများစွာ၏ site များနှင့်ဆောင်းပါးများကိုလင့်ထားသည် ... သူတို့ link ကိုရရှိခဲ့လို့ပဲ။
ထိုအရာကကျွန်ုပ်ထံချဉ်း ကပ်၍ ကျွန်ုပ်၏ပရိသတ်အတွက်တန်ဖိုးရှိသည့်ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ရေးနိုင်သလားဆိုသည့်စီးပွားရေးနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တွင်ပြproblemနာမရှိပါ။ ထို့အပြင်၎င်းသည်ရှိသည့်အရာတစ်ခုဖြစ်သည် မင်္ဂလာပါ ကြောင်းဆောင်းပါးအတွင်း link ကို။ ဆောင်းပါးများစွာကိုကျွန်ုပ်ငြင်းပယ်သည်။ အကြောင်းမှာတင်သွင်းသူများသည်ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ပါသောကြောင့်၎င်းတွင်ထင်ရှားသောနောက်ပြန်ချိတ်ဆက်မှုတစ်ခုပါရှိသည်။ သို့သော်လည်းငါသည်စိတ်ကူးဆောင်းပါးများဖြစ်ကြောင်းအများအပြားအများအပြားထုတ်ဝေရန်နှင့်စာရေးသူအသုံးပြုသော link ကိုငါ့စာဖတ်သူတွေအတွက်တန်ဖိုးရှိလိမ့်မယ်။
ငါအဝေးရောက်မလုပ်ပေးပါဘူး ... ငါပြန်ချိတ်ဆက်ဖြစ်ကြောင်းနီးပါး 110,000 link များရှိသည် Martech Zone။ ငါထင်တာကဒီ site မှာငါခွင့်ပြုထားတဲ့ဆောင်းပါးတွေရဲ့အရည်အသွေးကိုသက်သေပြနေတယ်။ သင့်ရဲ့အချိန်ကိုထူးခြားတဲ့အကြောင်းအရာထုတ်ဝေသင့်ရဲ့အချိန်ဖြုန်း ... နှင့် backlinks ကိုလိုက်နာပါလိမ့်မယ်။
Tags: backlink အဝေးရောက်နောက်ကြောင်းပြန်website ရဲ့ backlinkမှတ်ချက်များလင့်များဖွင့်လှစ်ခြင်းမင်္ဂလာပါdofollow လင့်များဖက်ဒရယ်ကုန်သွယ်ရေးကော်မရှင်FTCgoogle search consoleဂူဂဲလ်ဝန်ဆောင်မှု၏စည်းကမ်းချက်များ+ googlelink ကိုဝင်ငွေlink ကိုအရည်အသွေးlink-buildingnofollownofollow လင့်များအော်ဂဲနစ်ရှာဖွေရေးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်လစာလင့်များအရည်အသွေးလင့်များrelrel dofollowrel nofollowrel sponsorrel ugcရှာဖွေရေးအင်ဂျင် crawlersရှာဖွေရေးအဆင့်ကမကထပြုထားသောလင့်ခ်များugcugc လင့်များwordpress dofollowwordpress nofollow
Scratchpad Command: ဤ Chrome Plugin သည်မည်သည့် Web App မှ Salesforce ကို Access နှင့် Update လုပ်ရန်အမြန်ဆုံးနည်းလမ်းကိုပေးသည်
21:2007 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 1, 35
Dofollow plugin Doug ကိုထောက်ပြသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ WordPress မှမှတ်ချက်များတွင် link များသို့ rel = "nofollow" ထည့်သွင်းထားကြောင်းသတိပြုမိခဲ့သည်။ မှတ်ချက်များကိုအဆင့်မြှင့်တင်နေသမျှကာလပတ်လုံး၊ မှတ်ချက်များတွင်ကျန်ရှိနေသေးသောမည်သည့်ဆက်စပ်မှုကိုမဆိုထိုက်သင့်သောဂုဏ်ပြုထိုက်သည်။
22:2007 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 2, 42
အစွန်အဖျားအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ငါ plug-in ကို install လုပ်တယ် (လုံးဝနာကျင်မှုမရှိတဲ့လုပ်ထုံးလုပ်နည်း။ )
အင်တာဗျူးတစ်ခုတွင် spammer မှမှတ်ချက်တစ်ခုက -
“ ဂူဂဲလ်၊ Yahoo နှင့် MSN တို့၏“ လိုက်နာခြင်းမရှိသော” အချိတ်အဆက်များကိုဂုဏ်ပြုရန်အစပြုလုပ်ဆောင်ခြင်းသည်ဆမ်နှင့်သူ၏အကျင့်ကိုရှုံးနိမ့်မည်လော။ ရေတိုအတွက်၊ အကျိုးသက်ရောက်လိမ့်မယ်လို့မထင်ပါဘူး။
22:2007 pm တွင်ဇန်နဝါရီလ 5, 56
မာတင်, အလွန်ဆောင်းပါး။ သူ၏အလုပ်သည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကမည်မျှခက်ခဲလာသည်ကိုကျွန်ုပ်တွေးမိသည်။
24:2007 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 6, 22 တွင်
ငါလိုက်နာစေလိုသော link ကိုရွေးချယ်ရန်နည်းလမ်းရှိပါသလား (wow, ငါလုပ်သောစပ်စုသောဘာသာစကားတည်ဆောက်မှု)? အကြောင်းပြချက်မှာ crappy ဆိုသော site ကို crapy information ဖြင့်ရည်ညွှန်းသောအခါ၎င်းသည်အလွန်အမင်းမြှင့်တင်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ ဆင်ဆာဖြတ်တောက်မှုအဖြစ်မဟုတ်ပါ (အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်ကိုယ်ပိုင်ထင်မြင်ချက်နှင့်အလွန်ကွာခြားသည့်နိုင်ငံရေးထင်မြင်ချက်ကိုရည်ညွှန်းပါက၊ ၎င်းသည်ကောင်းစွာအခြေပြုပြီးကောင်းမွန်စွာထားပါကကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုမြှင့်တင်ရန်ပြproblemနာမရှိပါ), ဒါပေမယ့် entropy ကိုတွန်းလှန်ရန်နှင့်တူးဖော်ရန်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ crappy အကြောင်းအရာ။
ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်လင့်ခ်များကိုတည်းဖြတ်ရန်ပြproblemနာမရှိပါ။ ကျွန်ုပ်သည်ပုံမှန်အားဖြင့် Google Analytics မှထွက်နေသော link များ၊ link ခေါင်းစဉ်များနှင့် visitors ည့်သည်များစာစီစာကုံးများကိုပြုပြင်ရန်မှတ်ချက်များကိုတည်းဖြတ်သည်၊ သို့သော်၎င်းကိုအချို့သောအတိုင်းအတာအထိအလိုအလျောက်အလိုအလျောက်လုပ်ခြင်းသည်ကောင်းပါသည်။
24:2007 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 6, 52 တွင်
သေချာတာပေါ့! rel =” nofollow” ကိုသင်ဂူဂဲလ်အဆင့်မသတ်မှတ်လိုသောမည်သည့်လင့်ခ်တွင်မဆိုထည့်နိုင်သည်။ ဥပမာ -
24:2007 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 7, 22 တွင်
ya, သူတို့ကိုဖျက်ပစ်ရန်ကြိုးစားရန်ထက်ပိုမိုလွယ်ကူပေလိမ့်မည်။ ငါကဲ့သို့သောအများအားဖြင့်အသုံးပြုသောဒြပ်စင်အားလုံးကိုကျွန်ုပ်၏ Opera ၏မှတ်စုများ (အချိန်တိုင်းသင်၏ဘရောင်ဇာထဲတွင်ဘစ်များ၊ အပိုင်းအစများနှင့်ကုဒ်နံပါတ်များထည့်ထားရန်အဆင်သင့်ရှိသည်) တွင်သိမ်းထားသဖြင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်တကယ့် copy-paste သာဖြစ်သည်။
28:2007 pm မှာဖေဖော်ဝါရီ 12, 55
မတ်လ 26, 2007 မှာ 5: 23 AM
ငါ Doug သဘောတူတယ် မှတ်ချက်တစ်ခုချင်းစီကိုဖတ်ရှုခြင်းနှင့်တည်းဖြတ်ခြင်း (သင်ဖြစ်သင့်သည်) တွင်ပြtoနာရှိပါကစစ်မှန်သောမှတ်ချက်များကိုသင့်လျော်သော link တစ်ခုဖြင့်ဆုချခြင်းသည်အဓိပ္ပာယ်ရှိသည်။
ရလဒ်အနေဖြင့်သင်သည်“ Great post” မှတ်ချက်များကိုထပ်မံရရှိလိမ့်မည်၊ သို့သော်၎င်းတို့သည်မည်သို့ပင်ဖြစ်စေအမှိုက်ပုံးထဲသို့ရောက်သွားမည်။
သိသာသော spam များသည်“ SEO expert” သို့မဟုတ်“ web design Atlanta” သို့မဟုတ် keyword တစ်ခုခုတင်ထားသောအမည်များရှိသည်။ စစ်မှန်သောသူများတွင်များသောအားဖြင့်“ Lisa” သို့မဟုတ်“ Robert” စသည့်အမည်များရှိသည်။
မတ်လ 26, 2007 မှာ 2: 20 pm တွင်
သငျသညျအဘယ်သူမျှမအောက်ပါအတိုင်းပြissueနာအပေါ်ရပ်တည်ချက်ယူ Cool ။ ရလဒ်အပေါ်မည်သည့်မှတ်ချက်များ? သင်ရည်ရွယ်ထားသောရလာဒ်များရခဲ့သလား။
မတ်လ 26, 2007 မှာ 6: 11 pm တွင်
ဧပြီ 27, 2007 မှာ 4: 29 pm တွင်
ငါ Drupal-powered ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ကိုဖွင့်ထားတယ်၊ ဒါကြောင့် rel = nofollow မပါဘဲထည့်သွင်းလိုက်တယ်၊ မင်းဒါကိုထည့်သွင်းဖို့ plugin ကိုသွင်းရမယ်။ ငါခဏလုပ်ဖို့အကြောင်းပေမယ့်အဲဒီလိုလုပ်ဖို့တစ်ခုတည်းသောအကြောင်းပြချက်အခြားလူများရဲ့က်ဘ်ဆိုက်များအပေါ်ငါစွန့်ခွာနေတဲ့မှတ်ချက်များငါ့ကိုစာမျက်နှာရာထူးပေးခြင်းနေကြသည်မဟုတ်သောအနှံ့သဘောသဘာဝကြောင်းသဘောပေါက်လာတယ် ငါကအဖြစ်ကထားခဲ့ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။
လူအများစုကသူတို့၏မှတ်ချက်များကိုအလယ်အလတ်အဆင့်သတ်မှတ်ထားသဖြင့်အချိန်ကိုအကျိုးရှိရှိအသုံးပြုသူများကိုဘာကြောင့်ဒီ site ပေါ်တွင်အသုံးချသင့်သနည်း။
မီးခိုးရောင်inရိယာရှိမှတ်ချက်များကိုမဖျက်မိရန်ကျွန်ုပ်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်မှတ်ချက်ပေးသည့်မူဝါဒထည့်ပြီးပါပြီ။
ဥပမာအားဖြင့်၊ တစ်စုံတစ် ဦး က“ ကောင်းတဲ့ site” ဆိုသောမှတ်ချက်ထွက်သွားပါက URL နေရာကွက်လပ်၌ကွက်လပ်မထားပါကမှတ်ချက်ကိုဖျက်ပစ်ရန်ကျွန်ုပ်အကြံပြုသည်။ ထိုကဲ့သို့သောမူဝါဒမရှိရင်ငါ link ကိုစစ်ဆေးရန်နှင့် site ပေါ်တွင်အခြေခံပြီးဆုံးဖြတ်ရန်မဖြစ်မနေခံစားရတယ်။
မေလ 21, 2007 မှာ 11: 38 pm တွင်
အင်ဖိုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်, ငါစပ်စု Tho ။
အချို့လူများကစာမျက်နှာများကိုနောက်ဆက်တွဲအနေဖြင့်နောက်ဆက်တွဲအမှတ်အသားဖြင့်ဆက်လက်ရည်ညွှန်းနေ ဦး မည်ဟုဆိုကြသည်။ ဒါအမှန်လား
မေလ 22, 2007 မှာ 6: 33 AM
ဟုတ်ပါသည်၊ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အားလုံးသည်လိုက်နာရန်မလိုပါ။ ဂူဂဲလ်သည်ပိတ်ပင်ထားမှုတွင်ပါ ၀ င်သည့်ကြီးမားသည့်ကောင်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ထိုအတိုင်းဖြစ်လာသည်။ Live, Ask သို့မဟုတ် Yahoo! ထွက်တွက်ဆအချို့တူးယူနိုင်ပါတယ်။
ဇွန် 20, 2007 မှာ 5: 10 pm တွင်
အလုပ်ကောင်း - ငါ nofollow ကိုဆန့်ကျင်တာ။
မည်သည့် link ကိုမဆိုရေတွက်သင့်သည်၊ သို့မဟုတ်သင် link တည်ရှိရန်ခွင့်မပြုသင့်ပါ။ nofollow ကိုသူတို့၏ပို့စ်များအတွင်းရှိ link များသို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိထည့်သွင်းထားသူများသည်၎င်းတို့အနေဖြင့် outbound link များမရရှိနိုင်ကြောင်းသိသည်။ သီအိုရီအရဆိုလျှင်၎င်းတို့သည်ချိတ်ဆက်ထားခြင်းထက်ပိုမိုချိတ်ဆက်ထားသောဆိုဒ်များသည် PR နည်းပါးခြင်းဖြစ်သည်။
Hobo SEO ဆိုသည်မှာစကော့တလန်
ဇွန် 23, 2007 မှာ 2: 04 pm တွင်
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ က်ဘ်ဘလော့ဂ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့လည်းအလားတူပြုခဲ့ပြီးသုံးစွဲသူများ၏ပံ့ပိုးမှုနှင့်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ဖျော်ရည်တို့၏အကျိုးရလဒ်များ မှလွဲ၍ အချည်းနှီးဖြစ်သည်။ 🙂
16:2007 pm တွင်ဇူလိုင်လ 7, 34
IMO rel =” nofollow” ဟာလုံးဝအသုံးမကျဖြစ်ပြီး၊ spam များသည် software ကိုအသုံးပြုတဲ့အတွက် comment spam မလုပ်နိုင်ပါ။ comment spamers တွေကိုအကောင်းဆုံးဖြေရှင်းချက်ကတော့ Akismet, Bad Behavior နဲ့ captchas (သို့) လူ့မေးခွန်းတွေစတဲ့ plugins တွေဖြစ်တယ်။
22:2007 pm တွင်ဇူလိုင်လ 3, 01
ဟုတ်လား သူတို့အားမိုက်မဲဝီကီ? s!
ငါတို့ရှိသမျှသည် nofollow ကိုသုံးလျှင်ဘာဖြစ်မည်နည်း
29:2007 pm တွင်ဇူလိုင်လ 3, 30
မင်္ဂလာပါ။ WordPress, Yahoo 360, Blogger စသည်ဖြင့်“ nofollow” ကိုဘလော့ဂ်ပို့စ်များတွင်အသုံးပြုပါသလားဟုမေးလိုပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာကျွန်ုပ်ဘလော့ဂ်တွင်ကျွန်ုပ်ရေးသားချက်တစ်ခုတင်လိုက်ပြီးကျွန်ုပ်၏ပို့စ်တွင်ပါသော link သည် rel = nofollow သို့ပြောင်းလဲသွားပါသလား။
6:2007 pm တွင်သြဂုတ်လ 10, 50
no follow attribute နှင့် ပတ်သက်၍ အလွန်ကောင်းသောဆောင်းပါးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ၎င်းသည် WordPress တွင်ပုံမှန်အဖြစ်ထည့်သွင်းထားခြင်းကြောင့်လူအများစုက၎င်းတွင်ရှိကြောင်းကိုပင်မသိကြပါ။
15:2007 pm တွင်သြဂုတ်လ 3, 00
ဒီ post အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ငါရှာတွေ့တာသိပ်နောက်ကျနေပြီဆိုတာသိပေမယ့်ငါဘလော့ဂ်စလုပ်ပြီးဘာကြောင့် hep wordpress ဟာငါ့လင့်ခ်တွေထဲမှာ nofollow ထည့်ရတာလဲဆိုတာကိုကြိုးစားရှာဖွေခဲ့တယ်။ မင်းရဲ့ဘလော့ဂ်ကိုရှာတဲ့အတွက်ငါ dofollow ထဲကိုထည့်လိုက်မယ်၊ ဒါကငါ့ရဲ့ Blog အသစ်မှာမှတ်ချက်တွေနဲ့အပြန်အလှန်တုံ့ပြန်မှုတွေကိုအားပေးလိမ့်မယ်။
သြဂုတ် 16, 2007 မှာ 10: 22 AM
ပါ ၀ င်မှုနှင့်မည်မျှတိုက်ရိုက်ကူညီသည်ကိုကျွန်ုပ်မသေချာပါ။ ဒါပေမယ့်ငါထင်တာက 'ငှက်တကောင်၏ငှက်များအတူတကွပျံသန်းသည်' လို့ဆိုလိုတာကသင်ဟာ nofollow ကိုအသုံးမပြုတဲ့အခြားဘလော့ဂ်တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးသင်ပါ ၀ င်ဖို့ပိုသင့်တော်ပါတယ်။ ရေရှည်မှာတော့အကျိုးရှိမယ်လို့ငါထင်တယ်။
ဘလော့ဂ်လုပ်ခြင်း၌ကျွန်ုပ်၏အောင်မြင်မှုများစွာသည်မင်းကဲ့သို့သောရှေးရှေးများ၏စကားဝိုင်းတွင်ပါ ၀ င်မှုအတွက်ဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်သောကြောင့်ငါသဘောကျသည်။ ငါဘာကြောင့်အကျိုးအမြတ်အားလုံးကိုရယူသင့်သလဲ။ !
26:2007 pm တွင်သြဂုတ်လ 6, 58
ဤအချက်အလက်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်၊ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏လင့်များသို့ rel tags များကိုကိုယ်တိုင်ထပ်မံထည့်သွင်းခဲ့သော်လည်းမှတ်ချက်ပေးရန်ဤချဉ်းကပ်မှုကိုပင်စဉ်းစားခဲ့ဖူးသည်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်မှတ်ချက်များကိုအကြီးအကျယ်အလယ်အလတ်အဆင့်သတ်မှတ်ပြီးကတည်းကဤအရာသည်စတင်လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။
စက်တင်ဘာ 10, 2007 မှာ 8: 48 AM
မင်္ဂလာပါ၊ ကျွန်ုပ်သည် DoFollow plugin ကိုလွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်က install လုပ်ခဲ့ပြီး၊ ကျွန်ုပ်ဆောင်းပါးများနှင့်မှတ်ချက်များတွင်ကျွန်ုပ်နှင့်ချိတ်ဆက်ခဲ့သောဘလော့ဂ်လေးများမှကျေးဇူးတင်စကားအချို့ရရှိခဲ့သည်။
ကြီးကျယ်သောအစပြုလုပ်ဆောင်မှုလည်းရှိသော်လည်းတင်းကျပ်သောမှတ်ချက် / အသုံးပြုသူစီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်အတူတကွပေါင်းစည်းပါကမဟုတ်ပါကဘလော့ဂ်များသည်ကျွန်ုပ်တို့ထင်သည်ထက် ပို၍ spam အရင်းအမြစ်များဖြစ်လာလိမ့်မည်
13:2007 pm တွင်ဒီဇင်ဘာလ 8, 31 တွင်
Doug, ဒီ nofollow အရာသည် blogger နှင့်တရားဝင်commentီကာဆရာနှစ် ဦး စလုံးအတွက်တကယ်နာကျင်ခဲ့သည်။ တစ်ယောက်ယောက်က admin ရဲ့အလိုအလျောက် nofollow ကို enable / disable ပြုလုပ်နိုင်တဲ့ plugin တစ်ခုကိုဖန်တီးနိုင်စေချင်ပါတယ်။ ငါသုံးဖူးတဲ့ nofollo plugins အားလုံးဟာမှတ်ချက်များနှင့် / သို့မဟုတ်ဝေဖန်သူအားလုံးအပေါ် nofollow tag ကိုမှုတ်ထုတ်သည်။ ဦး ပြောခဲ့သလိုအချို့လူတွေကသူတို့ရဲ့သုံးစွဲသူမှတ်ချက်တွေကိုအတည်ပြုဖို့ဇီဇာကြောင်နေကြတယ်
ဒီဇင်ဘာ 14, 2007 မှာ 3: 15 AM
ဂျက်စီသဘောတူတယ် WordPress မှထိုတုန့်ပြန်ချက်ကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ရရှိထားသော်လည်းရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များ၏ဖိအားအောက်တွင်ရှိနိုင်သည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။
ဒီဇင်ဘာ 14, 2007 မှာ 5: 52 AM
ရယ်စရာကောင်းသောအရာက nofollow ကိုထောက်ခံအားပေးသူအများစုသည်သူတို့၏ဆိုဒ်များ / ဘလော့ဂ်များတွင် nofollow attribute များရှိသည်။ လူတွေပြောပြီးနောက်တစ်ခုလုပ်တာကရယ်စရာမဟုတ်လား။ ငါ့ဘလော့ဂ်လိုပဲဒီမှာ dofollow တစ်ခုရှိနေတာကိုငါ ၀ မ်းမြောက်မိတယ်။ ဒါက google မှာရှိတဲ့ငါ့ PR ကိုဘယ်လိုအကျိုးသက်ရောက်မယ်ဆိုတာမသေချာဘူး။
3:2008 pm မှာဖေဖော်ဝါရီ 3, 42
ဒီကိုရှင်းပြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ၀ ဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုစတင်ရုံသာမကဘလော့ရွေးချယ်မှုအားလုံးကိုကြည့်နေပါတယ်။ ကံမကောင်းစွာဖြင့်ကျွန်ုပ်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်နှင့်ကျွန်ုပ်အသုံးပြုနိုင်သောစည်သွတ်ဘူးသောဘလော့ဂ်ဆော့ (ဖ်) ဝဲသည်ကျွန်ုပ်အား wordpress ကိုအသုံးပြုရန်စဉ်းစားနေခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တွင်ဝက်ဘ်ဆိုဒ် (၂) ခုရှိသည်။ တစ်ခုမှာဂူဂဲလ်နောက်ကျောချိတ်ဆက်မှုမရှိပါ။ နောက်တစ်နေ့တွင်ကျွန်ုပ်၏ဒုတိယစာမျက်နှာတွင်အပြာရောင်မှဂူဂဲလ် backlink (၁၀) ခုပေါ်လာသည်။ ကျွန်ုပ်အလွန်စိတ်လှုပ်ရှားမိသည်။ ငါဘလော့ဂ်တွေအားလုံးကိုအမြဲတမ်းတင်ထားတယ်၊ မင်းအဲဒီ့လင့်ခ်ကိုရချင်တယ်ဆိုတာတောင်မှမသိဘူး (duh, newbie!) ပြီးတော့ရုတ်တရက်ငါ Dawud Miracle ကနေလင့် ၁၀ ချက်ရတယ်။ သူဘယ်သူလဲဆိုတာ ??? ငါသည်သူ၏ site ကိုပြန် link ကိုနောက်တော်သို့လိုက်နှင့်ငါအပေါ်တင်ခဲ့သည်အများအပြားများစွာသောဘလော့ဂ်များများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်နားလည်သဘောပေါက်ကျေးဇူးတင်စကား, ကအံ့ဖွယ်ဖြစ်ခဲ့သည် !!! အဲဒီနောက်ငါဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့သလဲ၊ ဘာကြောင့်မဖြစ်ပျက်ခဲ့တာလဲဆိုတာကိုငါသိချင်ခဲ့တယ်။ ဒါဆိုအခုငါရပြီ ငါသည်ငါ့ဘလော့ဂ်ဆော့ဖ်ဝဲကိုတက်သည့်အခါငါ no- နောက်ဆက်တွဲအမျိုးအစားမဟုတ်ဘဲအောက်ပါအချက်များကိုရပါလိမ့်မယ်။ ငါတို့အားလုံးအောင်မြင်ဖို့လုံလောက်တယ်။